Indlela Yokuzikhusela Kwiingelosi Eziwa (iidemon)
Unqulo & Umoya Intshayelelo
Imfazwe Yemvelo Iqhinga lokulwa neengelosi ezimbi
Iingelosi eziwayo (eyaziwayo njengenkcubeko eyaziwayo njengeedemon ) zihlasela ngexesha lemfazwe yokomoya efanelekileyo kunye nokubi okuqhubekayo ehlabathini. Abayena nje abalinganiswa beengcamango kwiimvanoveli, ama-movie amaxhala, kunye nemidlalo yevidiyo, amakholwa athi. Iingelosi eziwayo zizinto zokomoya ngokwenene ezineenjongo ezinobungozi zokulimaza abantu xa zidibanisa nathi, nangona zibonakala zingenakulungeleka ukuba zichaphazele abantu, bathi amaYuda namaKristu .
Iingelosi eziwayo zingakulimaza ngeendlela ezahlukeneyo, ukuthetha ubuxoki kunye nokulingela ukuba wenze isono, ukuphazamiseka kwengqondo njengengcinezelo kunye nexhala okanye izifo zenyama okanye ukulimala ebomini bakho, ngokweTorah neBhayibhile. Ngethamsanqa, ezo zibhalo zonqulo nazo zibonisa iindlela ezininzi onokuzikhusela ekuphinjeni ububi obubangelwa yiengelosi ezingabikho ebomini bakho. Nantsi indlela yokuzikhusela kwiingelosi eziwayo:
Qaphela ukuba useMfayeni oyiMoya
IBhayibhile ithi kubalulekile ukukhumbula ukuba abantu bayingxenye yemfazwe yokomoya imihla ngemihla kweli hlabathi eliwileyo, apho iingelosi ezingekhoyo zibonakala zingabonakali kodwa zichaphazela ubomi bomntu: "Kuba umzabalazo wethu awunxamnye neyamazi negazi, kodwa abalawuli, nabasemagunyeni, ngokumalunga namagunya ale hlabathi elimnyama kunye nomoya wobubi kwiindawo zasemazulwini "(Efese 6:12).
Qaphela Xa Uqhagamshelana neengelosi ngokwakho
I-Tora kunye neBhayi- bhile icebisa abantu ukuba baqaphele xa beqhagamshelana neengelosi ngokwabo kunokulindela uThixo ukuzisa iingelosi ebomini babo ngokuthanda kwakhe. Ukuba uqhagamshelana neengelosi ngokwakho, awukwazi ukukhetha ukuba yiyiphi iingilosi eziya kuphendula, zithetha amaYuda namaKristu.
Ingelosi ewiweyo ingasebenzisa isigqibo sakho sokufikelela kwiingelosi kunokuba ungene ngqo kuThixo njengethuba lokukusebenzisa xa uguqulwe njengengelosi engcwele.
I-2 kwabaseKorinte 11:14 yeBhayibhile ithi uSathana , okhokelela iingelosi eziwileyo, "uziqhayisa njengengelosi yokukhanya" kunye neengelosi ezimkhonzayo "ziba njengabakhonzi bokulunga."
Qaphela imiyalezo yamanga
I-Tora kunye neBhayi- bhilisi isilumkiso sokuba iingelosi ezilahlekileyo zingathetha njengabaprofeti bobuxoki, kwaye kuthi kuYeremiya 23:16 ukuba abaprofeti bobuxoki "bathetha imibono engqondweni yabo, kungekhona emlonyeni weNkosi." USathana, "ungumqambimanga noyise wamanga," ngokukaYohane 8:44 yeBhayibhile.
Uvavanye iMilayezo Yokuba Iingelosi Zikunika
Musa ukumkela nayiphi na imiyalezo ongayifumana kwiingelosi njengeyinyaniso ngaphandle kokuvavanya nokuvavanya loo miyalezo. Eyoku-1 uYohane 4: 1 iluleka: "Bahlobo abathandekayo, ningakholelwa yonke imimoya, kodwa nivavanye umoya ukuba babone ukuba bavela kuThixo kuba abaprofeti abaninzi bobuxoki baye baphuma ehlabathini."
Uvavanyo lwe-asidi ukuba ingaba ingelosi inxibelelana nomyalezo ovela kuThixo yiloo nto isithunywa esiyithethayo ngoYesu Kristu, iBhayibhile ithi ku-1 Yohane 4: 2: "Nantsi indlela onokuyiqonda ngayo uMoya kaThixo. umoya ovuma ukuba uYesu Kristu weza enyameni uvela kuThixo. "
Fumana Ubulumko Ngobudlelwane Obusondeleyo NoThixo
I-Tora kunye neBhayibhile ithi kubalulekile ukuba abantu bahlale bexhamene noThixo kuba ubulumko obuvela kubuhlobo obusondeleyo noThixo buya kubanika abantu ithuba lokuqonda ukuba iingelosi ezidibana nazo ziingelosi ezithembekileyo okanye iingelosi eziwayo. IMizekeliso 9:10 ithi: "Ukwesaba kweNkosi kukuqala kobulumko, nokwazi oyingcwele kukuqonda."
Khetha ukulandela apho uThixo ekhokela khona
Ekugqibeleni, kubalulekile ukusekela ngokuzithandela izigqibo zakho zansuku zonke kwiimpawu ezibonisa oko uThixo akubaluleke kakhulu. Khetha ukukwenza okulungileyo, njengoko uThixo ekukhokela, nanini na unako. Musa ukulahla into okholelwayo xa ukhetha ukhetho ngalunye suku.
Oku kubalulekile kuba iingelosi eziwayo zihlala zikulinga ukuba wenze isono ukuze uzame ukukukhupha kude noThixo.
Isazi sengqondo uMnuz Scott Peck uhlolisisa "okwenene" kodwa into "engavumelekanga" yenkwenkwezi ebantwini bakhe kwincwadi ethi Glimpses kaMtyholi kwaye iphetha ngokuthi: "Ukuba neyona nto ingengozi. Xa uthathwa, ixhoba kufuneka, ubuncinane ngandlela-thile, lisebenzisane okanye lithengise kumtyholi. "
Encwadini yakhe malunga nobubi obubizwa ngokuba ngabantu bobuxoki , uPeck uthi indlela yokukhululeka ebukhosini kukungenisa uThixo kunye nokulunga kwakhe: "Kukho amaqela amabini: ukuthobela kuThixo nokulunga okanye ukungavumi ukuhambisa nantoni na ngaphandle kweyakhe intando - ukwenqaba ngokuzenzekelayo ikhoboka omnye kumandla omabi. Ekugqibeleni kufuneka sibe ngabanye bakaThixo okanye uSathana. "
Yintoni i-Angel Orbs?
Izihlalo zeengelosi kwiNgelosi yamaKristu
Ngaba Iingelosi Ziyazi Imfihlo Yakho?
Ingelosi eyinkulu uMikayeli kunye ne-Guardian Angels Escorting Souls ukuya ezulwini
Iingelosi, Imithandazo kunye neMimangaliso
Iingelosi Ziyazi Njani Ixesha Elizayo?
Kutheni Iingelosi Zingaphenduli Imithandazo Yam?
Iingelosi Zemibala: I-Blue Light Ray, ilaywe nguMikayeli oyiNtloko uMichael
Iingoma ezilishumi elinesithoba ezithatha ifa likaNine Simone
Impembelelo yaseMexico: US Expedition Puniti
Indlela yokudibanisa isiFrentshi "Mkeleke" (ukuba Mkeleke)
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiKholeji eziphezulu zaseNorth Carolina
Qinisa i-Rotator Cuff yakho usebenzisa iiCables
Ukusebenza kweZiselo zoMdlalo
Uvavanyo lwe-Y-DNA yeGenealogy
Ixesha liphi uvavanyo lwe-SAT?
Ukuguquka kwe-American Isolationism
Ukulungiswa kweeHoloji eziPhezulu eziPhezulu
'Iinkwenkwezi zeNkwenkwezi: Abadlali beClone War'
Amazwi angamaSanskrit aqala ngo-A